Isitudiyo esikhulu esinebalcony ngqo kwibala legalufa
I-90% yeendwendwe zakutshanje inike uMartina iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Indawo yokuhlala iyayichukumisa indawo yayo ethe ngqo kwindawo yegalufa yeVulpera kunye nomgama omfutshane kakhulu ukuya kwibhasi ye-ski, ekuthatha ukuya kwisikhululo sentlambo yeentaba zeMotta Naluns kwimizuzu nje embalwa. Le ndlu isandula ukuhlaziywa kwaye ibonelela ngebalcony enetafile kunye nezitulo ngeeyure zokuphumla. Ipizza eneoveni ebaswe ngamaplanga kunye nendawo yokutyela yegalufa yoluntu ikumgama wokuhamba. Umbono omangalisayo weentaba ezisezantsi ze-Engadine zigqibezela umnikelo.
Isitudiyo esimalunga ne-35 m2 sikumgangatho wesithathu onebhalkhoni enelanga. I studio yenzelwe ikhitshi evulekileyo kwaye inika indawo yokunandipha iiholide kunye.
• I-WiFi yasimahla
• Igumbi lokuhlala elinomabonakude kunye nebhedi eyiwodrophu ephindwe kabini (180 x 200 cm)
• Istudiyo sinomgangatho weparquet
• Ikhitshi, esandula ukufakwa ngoNovemba ka-2020, inesitovu seglasi seceramic (iipleyiti ezi-4), i-oveni, umatshini wokuhlamba izitya, umatshini wokucoca ikofu kunye
• Iseti ye-fondue kunye ne-oveni ye-racelette ziyafumaneka.
• Isikhenkcisi sinendawo esecaleni yesikhenkcisi.
• Igumbi lokuhlambela, ishawari / indlu yangasese enesitya sokuhlambela
• igumbi lokuhlamba impahla kunye nomatshini wokuhlamba kunye ne-tumbler yokusetyenziswa ngokubambisana
• Indawo yokupaka engaphantsi komhlaba
• Yahlula indawo yokutyibiliza etyibilikeni kunye nebhayisekile, kanye ngakwindawo yokupaka iimoto engaphantsi komhlaba
• Indlu ine-lift, indlu ikumgangatho wesithathu
• Ibhalkhoni enetafile nezitulo ezibini
Iholide eVulpera, oko kuthetha ukuphumla kwindawo ezolileyo ye-Scuol, indawo eqhelekileyo yase-Engadine, kwindawo ekufutshane nezindlu ezihonjiswe nge-sgrafitto, i-Swiss National Park, kufutshane nebala legalufa, ipaki endala entle, ecaleni kweArt Nouveau emangalisayo. pool yangaphandle, kufuphi salo ice Gurlaina kunye bhayisekile ebhafini umnikelo oko lesibini namnye.
Indawo yokuhlala iyayichukumisa indawo yayo ethe ngqo kwindawo yegalufa yeVulpera kunye nomgama omfutshane kakhulu ukuya kwibhasi ye-ski, ekuthatha ukuya kwisikhululo sentlambo yeentaba zeMotta Naluns kwimizuzu nje embalwa. Le ndlu isandula ukuhlaziywa kwaye ibonelela ngebalcony enetafile kunye nezitulo ngeeyure zokuphumla. Ipizzeria eneoveni ebaswe ngamaplanga kunye nendawo yokutyela yegalufa, ekwamkele iindwendwe, ikumgama wokuhamba.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Scuol